Home Wararka Farmaajo oo ka horyimid daaweynta dhaawacyada dagaalyahanada Al Sunna
Waxaa Magaalada Guriceel ee Gobolka Galgaduud maanta ilaa shalay ay ku dagaalamayay Ciidanka Dowladda Federaalka, kuwa Maamulka Galmudug iyo Ciidanka Ahlusunna Waljamaaca.
Dagaalkii oo socday labadii maalin ee u danbaeeysay ayaa ka dhashay Khasaare balaaran, gaar ahaan khasaaraha badan ayaa dhacay gelinkii dambe ee shalay, kadib markii Ciidanka Ahlusunna oo laga qabsaday Xarunta degmada Guriceel iyo Saldhiga Booliska ay dagaal rogaal celin ah ay soo qaadeen Magaalada, iyagoona ku qabsaday Xarumihii marka hore Ciidanka dowladda iyo kuwa Galmudug kala wareegeen.
Khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo kala gaaray labada dhinac ayaa ka dhashay dagaaladii dhacay, waxaana la xaqiijiyay inay ku geeriyoodeen in ka badan 70 ruux oo ay ku jiraan Saraakiil Ciidan, Askar iyo dad shacab ah oo rasaas haleeshay.
Sida MOL loo xaqiijiyay, Farmaajo ayaa gabi ahaanba diiday in dhaawaca dagaalyahanada Al Sunna lagu daaweeyo cusbitaalada hoosyimaada deeganada ka tirsay dowlada Goboleedka Galmudug. Qoor Qoor ayaa diyaarado ku daabulaynayo dhaawaca ciidankiisaa halka Ciidanka Al Subba aysan haysan Cibitaal iyaga u gaar oo dhaawacooda lagu daaweyo.
Dadka wada dhimanaayo ayaa ah dad wada-ehel ah, wada dhasahay, waxaana wax ka soo horjeeda sharciga caalamiga ah in dhaawacayada loo diido in la daaweeyo. Dhanka kale Al Sunna ayaa dhankooda sameeystay isbitaalo iyo goobo ay dadkooda ku daaweeyaan.